Madaxwayne kuxigeenkii hore ee Puntland oo soo dhoweeyay shirkii wadatashiga ee lagu soo gabagabeeyay Garoowe. – Radio Daljir
Gaalkacyo,Dec,25 -Madaxwayne kuxigeenkii hore ee Puntland Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo u wamarayay Radio Daljir ayaa ka hadlay shirkii wadatashiga Soomaaliya ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland islamarkaana ay ka qaybgaleen madax katirsan dowladda faderaalka,maamulada Puntland,Galmudug iyo Ahlu-sunah Waljamaaca.
Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo xilal kale duwan kasoo qabtay dowladda Puntland ayaa soo dhoweeyay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe,waxaana uu sheegay martigalinta shirkan ee Puntland inuu usoo hoyay sharaf iyo qadarin weyn.
Siyaasiga Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo wax laga weydiiyay sida uu u arko qaabka lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee nidaamka 4.5ka ayaa waxaa uu sheegay xiligaan inay tahay mid adag in lagu gudb, iyadoona uu sheegay dalka inuusan ka jirin dowlad dhexe oo guud ahaanba dalka maamusha.
“Arinta 4.5ka marxalad baa keentay,waqti baana keenay,waqtigii Imbagaati la joogay oo mashruucaasi lagu shaqeeynayay dalka xaalad baa jirtay ururo tiro badan,magacyo badan ha badnaadeen ama hayaraadeen qabaa’ilo bay ku salaysnaayeen,xalka ugu dhaw ayaa ahaa in sidaasi la yeelo”ayuu yiri Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab oo intaasi raaciyay in looga gudbi karo nidaamkaasi in la helo dowlad qaran oo dalka oo dhan maamusha,waxaana uu rajo wanaagsan uu ka muujiyay in mudo afar sano kadib laga gudbo nidaamka 4.5ka oo dad badan ay saluugeen.
Shirkii wadatashiga ee wajabigiisii labaad shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ayaa ahaa shirkii ugu waynaa ooa y kasoo qaybgalaan masuuliyiin Soomaaliyeed oo lagu qabto goob nabdoon oo dalka ka mid ah.